Somali / Akhbaar muhiim ah oo ku saabsan sanad dugsiyeedka soo socda
Hello. Anigu waxaan ahay Scott Siegfried, kormeeraha guud ee iskoolada Cherry Creek.
Iyada oo sanad dugsiyeedkii uu soo dhamaanayo, waxaan rabaa inaan u muujiyo mahadnaq qotodheer leh macalimiinteena, shaqaalaheena, ardayda iyo qoysaskeena sida ay ugu adkaysteen marxaladan adag.
Kan wuxuu ahaa gu 'aan caadi ahayn. Bishii March, waxaan bilownay nidaam waxbarasho oo internetka ah mudo shan maalmood dhexdood oo ardaydu ay dhiganeysay labadii bilood ee la soo dhaafay, taas oo badeshay qaabka guud ee nidaamkii waxbarashada.
Waxaan siinay in kabadan 6,500 oo kombuyuutar ardayda aan guryaha ku haysan. Waxaan u fidinay ku dhawaad ​​4,000 oo cunno ah maalintii ardayda, in kabadan 130,000 ilaa maanta. Kalkaaliyayaasha caafimaadka ee iskoolka iyo shaqaalaha caafimaadka maskaxda ayaa ardayda diyaar u ahaa iyagoo adeegsanaya nidaamka HealthLine. Ururka iskaashiga ee Dugsiyada Cherry Creek waxay lashaqeeyeen iskaashatada bulshada si ay u siiyaan buug, agabka iskoolka qoysas badan oo u baahan.
Runtii tan waa bulsho u kacda inay is taakulayso waqtigan.
Xitaa anagoo u dabaaldegayna adkeysiga iyo dadaalka adag ee ina soo gaarsiiyay dhamaadka sannad dugsiyeedkan, waxaan ognahay in caqabadaha ugu waaweyn ay wali naga horeeyaan. Maanta, waxaan rabaa inaan idinkala hadlo sida aan degmo ahaan u qorsheyneyno sannad dugsiyeedka soo socda.
Marka hore, si kastaba ha noqotee - waxaan sii wadaynaa inaan diyaarino qorshayaal shaqsi ahaan ah, ee xafladaha qalin-jabin tooska ah ee ardayda waqtiga xagaaga- summerka. Waxaan ka sugeynay hagida kama dambaysta ah saraakiisha caafimaadka kahor inta aan gaarin go'aan dhameystirin - waan idinla wadaagi doonaa macluumaadkan waqti dhaw. Waxaan sidoo kale ka codsan lahaa bulshadeena inay nagala qeyb qaataan isu diyaarinta gaarka ah oo loogu dabaaldegayo ardayda qalin-jabineysa ee degmada oo dhan maalinta xafladdooda loogu talagalay ee aheyd - May 20, 21, iyo 22keeda.
U diyaargarowga sanadka dambe - rajadayda ugu weyn waxay noqon laheyd inaan helo iskool caadi ah, laakiin rajadu kaligeed ma ahan karto istiraatiijiyad mana aaminsani inay taasi xaqiiqo tahay. Runtu waxay tahay, anagu ma garan karno sida sax ah ee mustaqbalku noqon doono.Anigu Shaqadaydu waa inaan ku hogaamiyo degmadan qorshayaal huwan duruufo badan oo kala duwan iyadoo loo diyaargaroobayo go'aan kasta oo la gaaro.
Markaan ka fikirayo dariiqooyin kala gadisan, waxaan marka hore ka fikiraa caafimaadka iyo badbaadada carruurteenna gaaraysa ilaa 55,000, iyo shaqaalaheena oo dhan ilaa 9,000 iyo ugu dambeynti guryaha ay ardaydan ku noqdaan maalin walba. Xaqiiqdu waxay tahay, markii 65,000 oo qof ay isugu soo dhowaadaan meelna ku kulmaan ilaa sideed saacadood maalintii, waxay wadaagi karaan jeermis ka bacdina guriga ayey kugu keeni karaan.
Markaa iyada oo la fiirinayo nooca halista caafimaadka ee saamayneysa waxbarashada iyo xaalada aan ku shaqeyno, waxaan ka heli doonaa talooyin iyo hagitaan xaga gudoomiyaha Gobolka, Waaxda Waxbarashada ee Colorado, iyo Waaxda Caafimaadka ee Tri-County.
Ugu dambeyntii, iyadoo aan loo fiirin qaabka loo wajahayo arintan, waa inaan diyaar u nahay inaan bixino waxbarasho adag, oo macno leh taas oo ardayda lagula xisaabtami karo barashada cusub.
Sida aan hubo inaad idinkana dareen santihiin, Marwalba waxaad ka daawanaysaa ama ku arkeysa TV ama qoraalo warbixin ah ku saabsan kala fogaanshaha- bulshada inay tahay dariiqa koowaad ee yareynta caabuqan koroonaha. Hadii amaradan hada jira ay sidan ku sii socdan, waxaan yeelan doonnaa qorshe aan ku ilaalinayno kala fogaanshaha bulshada iskoolada dhexdooda. Maadaama dugsiyada loo dhisay loona maalgaliyay inay ardayda iyo dadka waaween ee macalimiinta ah ay ku kulmaan goobo yaryar oo ay kuwada shaqeeyaan koox ahaan, habka kaliya ee ay ku hirgali karto in la kala fogaado waa in la sameeyo jadwal aan ardayda oo dhan iskoolka kaso wada xaadirin maalin kasta - hadii taasi ay dhacdo, isbedal wayn oo sameyn doona yaa dhici doona sanadka dambe, maadaama ay ardaydu Iskoolka imaan doonaan maalmo kala duwan maalmana ay guriga joogi doonaan.
Waxaan sidoo kale aaminsanahay hadii loo baahdo inaan u diyaar garoowno inaan u wareegno habka barashada fog ee internetka sanadka dhexdiisa. In kasta oo aan aaminsanahay in aan qabanay shaqo aan caadi ahayn oo waqti yarna aan ku dejinay nidaamka waxbarasho fog ee internetka gu'gan, waa in aan diyaar u nahay in aan sannadka dambe si fiican wax u qabano hadii loo baahdo.
Qayb muhiim ah oo tan ka mid ah waa khibradii aan ka helay bilihii ugu dambeeyay - qorshaheena waxaan horeyba u sameyneynaa isbedelo sida xadeynta tirada aaladaha ay ardaydu u isticmaali doonaan barashada, u diyaarinta barashada iyo isku xirnaanta duruusta - taas macnaheedu waa in macalimiinta ay hogaaminayan casharada si tooska ah oo ay fasalada oo dhan waqti isku mid ah ay ardayda u soo galaan sida waqtiga iskoolka caadiga ah oo kale, isla markaana ardayda lagula xisaabtamo ka qeybgalka iyo shaqadooda.
Taas waxay sidoo kale ka dhigan tahay in macalimiinta, waalidiinta iyo ardayda la siinayo dhamaan aaladaha, qalabka iyo taageerada lagama maarmaanka u ah in la baro aaladaha barashada ee internetka ka hor bilowga sannad dugsiyeedka.
Waxaan sidoo kale balaarin doonaa dugsiga sare ee 'Elevation' iyo ka dhexe ee cherry creek ee wax lagu baranayo nidaamka internetka oo loogu talagalay qoysaska raba xulasho ka duwan marka aan bilowno sannad dugsiyeedka soo socda.
Waxaan ka shaqeyneynaa qorshayaashaan waana idinla wadaagi doonnaa faahfaahinta sida ugu dhakhsaha badan ee aan kari karno. Si kastaba ha noqotee, inbadan waxay kuxirantahay hormarka laga gaaro xanuunkan waqtiga xagaaga-summerka. Mar labaad, rajadayda ugu weyn waxay tahay inaan dhamaanteen ku soo laabano iskoolka sdii caadiga ahayd, oo aan horeyba qorshahaas u diyaarinay, waxaanan ku dhaqmeeynay ila70 sano. Waxaan rumeysanahay inay tahay mas'uuliyadeyda, si kastaba ha noqotee, waxaan kaloo aaminsanahay inaad adiga oo ah bulshadeena, inaad naga fileyso inaan gaarno saddexda bilood ee soo socota oo aan qorsheyno mustaqbal aan la hubin. Si aan u qorsheyno si go'aan kasta oo loo gaaro oo ku saabsan xaalada iskoolada, waxaan diyaar u nahay inaan hirgalinno qaab macno leh.
Sidoo kale waa inaan idinla wadaago walaackeyga ku saabsan miisaaniyadeena sanadaha soo socda. Shalay waxaan ogaanay in gobolka uu qorsheynayo hoos udhac xaga miisaaniyada ah oo gaaraya ilaa $ 3 bilyan - oo loogu talagalay Iskoolada , taasi waxay u keeneysaa dugsiyada cherry creek in kabadan ilaa $ 30 milyan oo hoos u dhac ah. Tan macnaheedu waa waqtigii ugu adag ee soo mara 70kii-sano ee taariikhda degmada, waxaa nalooga baahan doonaa in aan hirgalinno qorshayaal aan horay loo arag iyada maalgelintuna ay malaayiin hoos u dhici doonto. Arintan waxay saameyn toos ah ku yeelan doontaa awooda aan u leenahay inaan ku sii hayno dhamaan shaqaalaha oo dhan, siino mushahar macno leh iyo fursadeena aan idinku soo gaarsiin karno isla barnaamijyo tayo sare leh ee aad fileysaan. waxaay xaaladan dhaqaale noqon doontaa mid saameyn ku yeelan doonta sanado badan - Waan idin ogeysiin doonaa isbedelada lagama maarmaanka ah ee ku saabsan miisaaniya uu Gobolku ka gooyay Dugsiyada.
Dhinaca kale, waxaan sii wadaynaa inaan taageerno bulshadeena si kasta oo aan awoodno. Iskoolada cherry Creek waxay iskaashi la sameynayaan haya'da caafimaadka ee ''STRIDE Community Health" si ay u bixiyaan baaritaanka cudurka' Koronafayraska 'ee rugaha caafimaad ee dhowr meelood oo ka mid ah iskooladeena sare labada bilood ee soo socda. Ka hubi barteena internetka taariikhaha soo socda iyo goobaha ay noqon doonaan meelaha baaritaanka lgu samayn doono. Baaritaanka waxaa heli kara xubin kasta oo bulshada ka mid ah.
Waxaan rabaa inaan ku soo afjaro anigoo u mahadcelinaya bulshadan sida wadajirka ah ee aad isu caawiseen inta lagu jiray qalalaasahan. Falalka naxariista, kalgacalka, iyo geesinimada aan idinku arkay way i dhiirrigalisay. Mahadsanid. Iyo sida had iyo jeer, nabadqab , iyo caafimaad qabo yaan idiin rajeynayaa.